We She Me: သိုးမည်းသာ ဖြစ်စေတော့
စစ်ကိုင်းသူ - 6/20/08, 2:34 AM
ကိုအန်ဒီ ပြောတာ ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့တွေက သူများယောင်လို့ယောင် အမောင် တောင်မှန်း မြောက်မှန်း မသိတွေ တော်တော်များတယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်လဲ အဲဒီထဲ ပါလားမသိ။
ဇနိ - 6/20/08, 2:40 AM
ဗဟုသုတရတဲ့ နောက်ထပ်ပို့စ်လေးပါ။ လောကကြီးမှာ သတိထားစရာတွေ ဆင်ခြင်စရာတွေအများသား။
ဘာပဲလုပ်လုပ် သတိပိုသည်မရှိ ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းနိုင်မှ တော်ကာကျမယ်။
ဝေတိုး - 6/20/08, 9:58 AM
sawphonelu - 6/20/08, 12:26 PM
အန် ဒီ ရေ ၊ အခု တ လော ကြက် ဝက် သိုး မျောက် တွေ ချည်း ဖတ်နေ ရ တယ် ။ ဖတ် မိ သ မျှ လည်း တစ် ခု ခု တော့ ရ လိုက် တာ ချည်း ပါ ပဲ ။ ကျေး ဇူး ပဲ ။
Synchro 305 ~ - 6/20/08, 4:46 PM
စိုးထက် - Soe Htet ! - 6/20/08, 10:01 PM
ခုမှ သေချာ လိုက်ဖတ်နေတာ ... မိုက်တယ် ... :)
Anonymous - 6/21/08, 2:45 PM
ကိုအန်ဒီရေ .. ဒီပို့စ်လေးက ဗဟုသုတဖြစ်ပြီး ထောက်ပြချက်တွေ ကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ် ။ ဟိုတခါ မီးလောင်တိုက်သွင်းတဲ့ ဗီယက်နမ် ဘုန်းကြီးအကြောင်းရေးသလိုပေါ့နော် ။ ဂျစ် ဘလော့ဂ်မှာ လင့်ခ်ထားလိုက်တယ် ။
လူ့ သဘာဝကြီးက လေတိုက်ရာယိမ်းတတ်တာ ၊ ရေဆန်မတက်ချင်တာ ၊ အတိုက်အခံနေရာမှာ အားလုံးနဲ့ စည်းတဘက်တည်း မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ထင်၂ပေါ်၂ မရပ်ရဲတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို ... ရပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ခံယူချက် မရှိလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Andy Myint - 6/21/08, 11:20 PM
ကျွန်တော်ကတော့ ခဏခဏ ဖြစ်တယ် မစစ်ကိုင်းသူ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပွဲဈေးတန်းမှာ ဒီလိုပဲ နောက်ကနေ လိုက်သွားလိုက်တာပဲ။
ဟုတ်တယ် ကိုဇနိ။ အနည်းဆုံး သူများယောင်တိုင်း လိုက်မယောက်မိအောင် ကိုယ်ကိုယ်ကို သတိပေးနေရတယ်။
Thanks Ma Wai Toe. Cheers! :)
ဟုတ်တယ် ကိုစောရေ... အကောင်ပလောင်တွေနဲ့ ဓါတ်ကျနေတယ်။
ကျေးဇူးပဲ Synchro။ ကျွန်တော် အဲဒီ ကိစ္စကို အဓိက ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဘလောက် လောကမှာမို့ ဘလောက် ဥပမာပေးလိုက်တာပါ။ တခြား ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
လာအာပေးတာ ကျေးဇူး ကိုစိုးထက်ကြီး ။
ကျေးဇူး ဂျစ်။ ဘလောက်ထဲမှာ မတွေ့တာတောင် နည်းနည်း ကြာသွားပြီ။ ကျွန်တော် ဂျစ်ရဲ့ တချို့စာတွေ ဖတ်ပေမယ့် ဘလောက်မှာတော့ ဘာမှ မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး။
Mhaw Sayar - 6/21/08, 11:28 PM
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဗျာ. အဲဒီ လူအုပ်ကြီးနောက်ကို လူတွေ လိုက်ကြတယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို ဘုရားဟော ကျမ်းဂန်တွေ တော်တော်များများမှာလည်း ကျွန်တော် တွေ့ဖူးတယ်ဗျ.... အခုထိလည်း အဲဒီ သဘာဝတွေ၊ သဘောတွေက မှန်တုန်းပါပဲဗျာ.
စိတ်ဝင်စားစရာတွေ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူး ကို အန်ဒီ. :)
Andy Myint - 6/28/08, 5:56 PM
ဟုတ်တယ် မှော်ဆရာ။ ကျွန်တော်လည်း ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်။ အသေအချာ မမှတ်မိတော့လို့။
ဘလူးဖီးနစ် - 6/29/08, 11:00 PM
ကျွန်တော်ဒီလို ထင်မိတယ် ကိုအန်ဒီရေ၊ အမှန်က အဲဒီ နောက်က လိုက်တဲ့ သူတွေက လုံးဝမစဉ်းစားလို့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ စဉ်းစားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကြောင်းပေးထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက် စဉ်းစားနေတာ။ နှပ်ကြောင်းပေးရာကို အလွယ်ဖဲချိုးမိသလိုပေါ့။ တနည်းပြောရရင် စဉ်းစားရာမှာ သူများပြောထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကို အခြေခံပြီး စဉ်းစား မိတာထင်တယ်ခင်ဗျ။ တစ်ခြားတစ်ဘက် က စဉ်းစားကြည့်ရကောင်းမှန်း မသိသလို ဖြစ်နေတာ။ ဆိုလိုတာက အချက်အလက်တွေ က နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ရှိနေပေမယ့် တစ်ဘက်သက် အချက်အလက်တွေကို စုပြီး လေ့လာရေးသားနေကြတာများတယ်ဗျ။ မျှမျှတတ နှစ်ဘက်စလုံးကို ကြားလူ အနေနဲ့ မြင်ကြည့်ပြီး ရေးတဲ့ သူနည်းနေတာဗျ။ အချက်အလက်တွေ ထုတ်ဖေါ်ပြောရာမှာလည်း ကိုယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် အမှန်ဆိုရေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲဒီ သဘောသဘာဝတွေကို တစ်ချို့ မီဒီယာတွေရဲ့ ဆွေးနွေးခန်းတွေမှာ အသုံးချလေ့ရှိပြီး တရားရုံးတွေမှာ ရှေ့နေတွေက သက်သေတွေကို အဲလို မေးရင် ကြောင်းကျိုးပြ မေးခွန်းအနေနဲ့ ကန့်ကွက်ခံရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ။
Anonymous - 7/4/08, 3:03 AM
It is happening the same in the United States, check the article below.
Political segregation in the United States
"There isadanger in this. Studies suggest that whenagroup is ideologically homogeneous, its members tend to grow more extreme. Even clever, fair-minded people are not immune. Cass Sunstein and David Schkade, two academics, found that Republican-appointed judges vote more conservatively when sitting onapanel with other Republicans than when sitting with Democrats. Democratic judges become more liberal when on the bench with fellow Democrats."
Alice - 7/12/08, 11:23 AM
မျိုးဝင်းဇော် - 8/7/08, 3:37 AM
မှန်တယ် ကိုအန်ဒီ ဒါမျိုး ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးတယ် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါ။ ၁၉၈၈ တုန်းက အဲဒီတုန်းက ငယ်လို့ သိပ်သတိမထားမိဘူး ၁၉၉၆ ကျတော့ ကိုယ်တိုင်လဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေ အရွယ်လည်းနည်းနည်း ရတော့မှ သတိထားမိတယ် ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ ကျောင်းသားတွေလေ မကျေနပ်တာဘဲသိတယ် မကျေနပ်တာကိုဘဲ ထုတ်ပြောချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ် အဲဒီမှာ ညဘက်ကြီး ရန်ကုန်မြို့ ကိုလှည်းတန်းကနေစပြီး ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်က ပတ်ပြီး ဆန္ဒပြတာပေါ့ အဲဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ပြီး သွားနေတဲ့ (စက်မှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေပါ) လူတွေကို ဘယ်ကနေဘယ်လို တခြားသူတွေက ဦးဆောင်သွားလဲမသိ ဦးထောင်ဘိုလမ်း (စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ရွှေတိဂုံဘုရားကြား) ကို ၀င်သွားတယ် အဲဒီမှာ လုံထိန်းတွေက မြောက်ဥက္ကလာ မရမ်းကုန်းဘက်သွားတဲ့ ဗဟန်းလမ်းမကို တဖက်ပိတ်လိုက်တယ် ဦးထောင်ဘိုလမ်းဘက် မောင်းတင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ ပြီးတော့ နှစ်ဘက်ပိတ်ပြီး ဖမ်းတော့တာဘဲဗျာ တော်သေးတယ် ကျောင်းသား ၅၀၀ ကျော် ၆၀၀ နီးပါးကိုဖမ်းပြီး ညနေပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ်ပေးလို့ ကိုအန်ဒီပြောသလို တွက်ကြည့်ရင် ၅၀၀ ၆၀၀ လောက်ထိန်းဖို့ ၃၀ လောက်ဘဲလိုတာ မှန်တယ်ဗျာ
တေဇာ - 1/11/10, 9:52 AM
သိုးမည်းတွေအကြောင်းဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းလိမ့်မယ်.. ;P
မန်းကိုကို - 2/12/11, 8:41 AM
ကို Andy ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သီအိုရီကဏ္ဍကို လူတွေစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုလို့ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ် ။
အပေါ်မှာ ဘလူးဖီးနစ်ပြောသွားတဲ့ “နှပ်ကြောင်းပေးရာကို အလွယ်ဖဲချိုးမိသလိုပေါ့။” ဆိုတာမျိုး၊ အမည်မသိရဲ့ တရားသူကြီးနမူနာနဲ့ မျိုးဝင်းဇော်တို့ရဲ့ ထောင်ချောက်တွေကတော့ နမူနာကောင်းတွေပါပဲ။ (ထောင်ချောက်ကတော့ ၈၈ ကတည်းက သုံးခဲ့တာလို့ ကြားဖူးပါတယ်)။ တစ်ခုရှိတာကတော့ လူသားတွေအနေနဲ့ ကြောင်းပေးတဲ့လမ်းကို ပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်သုံးစွဲသွားတတ်တဲ့အလေ့ပါ ။ ဥပမာ ဘလော့မှာ တစ်ယောက်က အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖေါ်လိုက်တဲ့အခါ နောက်လူတွေက ထောက်ခံတဲ့သူထောက်ခံကြသလို ဝေဖန်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ပို့စ်တွေ ထပ်ပေါ်လာကြတော့ အမြင်ဗဟုသုတတွေ တိုးတာပေါ့ဗျာ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တော့ သိုးငပေ သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်သိုးများ ဖြစ်နေသလားပဲ ။
Andy Myint - 2/13/11, 8:26 PM
အဲဒီလိုလည်း ဟုတ်ပြန်တယ် ကိုမန်းကိုကို ။ တကယ်တော့ လူတွေကလည်း အခြေခံ အချက်အလက်တွေပေါ်ကနေ အဆင့်ဆင့် လူ့လောကကြီး တိုးတက်အောင် တည်ဆောက်နေရတာ ဆိုတော့ အကျင့်ပါနေတာလည်း ဖြစ်သလို မွေးရာပါ Instinct လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အခါ၊ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်တွေ ရှိလာတဲ့ အခါမှသာ ကိုယ့်ဆရာ ရေးထားသလို Critical Thinking တွေ လုပ်နိုင်လာပါတယ်။
Yan - 9/8/13, 4:59 AM
မတွေ့ဖြစ်ကြတာ အတော်ကြာပြီ။ ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျလို့ FaceBook မှာရှိတဲ့ Myanmar Blogs Digest Page လေးမှာ ဝေမျှဖို့ ယူသွားပါတယ် ခင်ဗျာ.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်လောက် အက်ပေးပါဦး